Ama-Scarers abonakalayo Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Ama-Scarers Factory Factory
6803 Engagqwali Uzimele Iglu Board Fly Trap Lamp
Amafolda Amagundane Esikrini Esigoqekayo
Inyoni Spike S40
Inyoni Spike 5010-50
Itape Tape Scare BST-H
Itape Tape Scare
Itheyipu ye-Holographic repellent isebenza njengesivimbela inyoni emaceleni amabili. Ilungele ukuxosha izinyoni ngokukhanya nangomsindo, Iteyipu inikela ngokuvikelwa kwezitshalo nezithelo. Isayizi we-scare tape: 2.5cm (1 intshi) ububanzi, kufakazela ukukhetha okuhle ukuxosha izinyoni ngomsindo wokukhanya nomoya. Okubalulekile: Kwenziwe ngento engeyona enobuthi, elula, esebenzayo futhi enobungani bemvelo, ukubona i-laser enephethini ye-iris kunikeza umphumela ophezulu wokwethusa izinyoni kude nezingadi zakho, izithelo, izihlahla, izitshalo nemifino.
Izinyoni zokwesaba ama-BSB-01
Amabhaluni Wokwethusa Izinyoni
Ivimbela izinyoni ezimisa ikhaya ezikhumulweni zezindiza nasezikebheni zemikhumbi, noma zidla izihlahla zezithelo! Vikela i-stucco, i-sidings, izimoto, izikebhe kanye nezingadi ekubekeni izidleke, ubulembu bezinyoni obonakalisayo nezinye izinhlobo zokulimala kwezinyoni. Phinda uthole ama-patio namabhalkhoni bese ugcine isikhathi nemali ekuhlanzeni nasekulungiseni izinto. Imibala emithathu.
Izinyoni Zokwesaba-Ukwesabisa Amehlo TE-01
Amehlo Okuthusa Izinyoni
Izinyoni ezibonakala kakhulu ezisabisa ibhola, "Amehlo" e-holographic alandela zonke izinhlobo zezinyoni ezinambuzane
Amaqiniso kakhulu futhi asabisayo ama-predator decoy, Angasetshenziswa ngokuhlanganiswa ne-electronic bird deterrent.
I-Bird Scare Flying Hawk Kite
I-flying hawk kite isabisa izinyoni ezinambuzaneni ezitshalweni. Ikhithi ephelele ifaka ikhayithi, isigxobo se-fiberglass telescopic nentambo
Usayizi wepali telescopic: isigxobo esingu-6mx19mm noma isigxobo esingu-10m x28mm
Iprowler Owl DO-F1
I-owl decoy enezimpiko ezindizayo: ukwesabisa isidlakela Izingxenye ezihamba emoyeni zithuthukisa ubuqiniso obushukumisayo. Iphoqa izinyoni ezingafuneki nezinye izinambuzane ezincane. Iqeda ukuhlanzwa nokulungiswa okuhambisana nokutheleleka kwezinambuzane.
Itape Tape Scare BST-R
Izinyoni ezethusayo itheyipu ekhanyayo: I-double side reflective bird scare tape professional grade heavy duty tape iyatholakala, ikhwalithi ephezulu esetshenziswa ngabalimi abangochwepheshe, esetshenziswa kumakhulu amahektare wezivini nezithelo zezithelo.